Somaliland: Wasiirul Dawlaha Shaqadda Oo Tahriibka Dhalinyarrada Ku Eedeeyay Waalidiinta - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirul Dawlaha Shaqadda Oo Tahriibka Dhalinyarrada Ku Eedeeyay Waalidiinta
Wasiirul dawlaha wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshadda Somaliland, Cabdi Daahir Cammuud ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Silaanyo ay shaqo abuur u samaysay dhalinyarrada, isla markaana ay saddex laabtay tirada shaqaalaha dawladda.
Wasiir Camuud oo shalay ka qeyb-galay doodii barnaamijka Jimcaha ee idaacada BBC oo lagaga hadlayay dhibaatadda Tahriibka. Waxaanu ku dooday in shaqaalaha dawladda tiradoodu ahayd markii xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo la wareegtay tallada dalka 6000 kun oo shaqaale ah, halka ay wakhti xaadirkanna shaqaalaha dawladda la gaadh siiyay ugu yaraan 19000 kun oo qof.
“Somaliland waa dal degan oo isku tashaday shaqo abuurna waa la sameeyay, dawladanina waxay shaqaalaha dawlada ugu timid 6000 oo shaqaale ah, imakana waxay marayaan 19000 oo qof.sidaasna waxa loo sameeyay waa shaqo abuur ay samaysay xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud (Silaanyo). waxa kale oo ay samaysay sharcigii ayay u furtay dhalinyarrada si ay uga qeyb-galaan siyaasadda oo golaha degaamada ayay ka soo baxeen oo wasiirradii ayay ka mid noqdeen,’’ayuu yidhi Wasiirul dawlaha shaqaddu.
Mr. waxa uu xusay in dawladaha Jabuuti iyo Itoobiya ay iska kaashadeen la dagaalanka tahriibka, iyadoo dhalinyarrada tahriibaysaa ay u wareegeen dalka Masar oo ay ka tahriibaan. “Dawladaha Jabuuti iyo Itoobiya waanu kala kaashanay joojinta tahriibka wax faro badana waa laga qabtay markii ay u suurta gali wayday in dhalinyarrada tahriibaysaa ay maraan dhinaca Itoobiya ayay xaga Masar u wareegeen, markaa wax fara badan oo laga qabtay wuu jiraa tahriibka,” ayuu yidhi Wasiirku.
Dhinaca kale, Wasiirul dawlaha wasaaradda shaqadda iyo arrimaha bulshaddu waxa uu waalidiinta ku canaantay inay kaalin shariif ah ku leeyihiin tahriibinta dhalinyarrada, waxaanu yidhi “Waalidiintu qeyb ayay ka yihiin dhalinyarrada tahriibaysa lacagta cidda u dirtaana waa waalidiinta waxaan leeyahay dadka waalidiinta ah dalkiina aamina iyadoo shaqo la’aani jirto oo dagaalo jireen ayaa hore loogu noolaan jiray dalka. Waxaana waalidka leeyahay caruurtiina ceshada dalkani isagoo sidan ka xun ayaa lagu noolaa aamina ayaan leeyahay waalidka iyo caruurtaba.”
Wasiirul dawluhu waxa kale oo uu gaashaanka ku dhuftay fikirka ah in xukuumaddu ay xilalka dawladda u dhiibto qurbo-jooga, waxaanu kaga jawaabay “Qurbo joogta ayay noqotay ee la leeyahay xilal ayaa loo magacaabay way jirtaa laakiin dastuurka dawladuhu leeyihiin mid ba wax buu qorayaa. waana loo siman yahy shaqada iyo xilalka ku dibada jooga iyo mid gudaha joogaba haddii kii dibada joogay la magacaabo ka gudaha joogana bari ayaa la magacaabi doonaa.”
Somaliland: “Annagu (UCID) Xal Siyaasi Ah Ayaanu Lanimid Laakiin WADDANI Iyo Kulmiye Iyaga Uunbaa Isku Muuqda”Cali Guray